स्विजरल्याण्ड पुगेकी बलिउड अभिनेत्री करिनाको भन्दा उनले लगाएको गाउनको चर्चा बढी ! आखिर किन ? - PuraKhabar
स्विजरल्याण्ड पुगेकी बलिउड अभिनेत्री करिनाको भन्दा उनले लगाएको गाउनको चर्चा बढी ! आखिर किन ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय निकै राम्रो रहनसहनको कारण चर्चामा रहेकी बलिउड अभिनेत्री करिना कपूर एक न एक कारण सधै चर्चामा रहने गर्छिन् । यतिबेलो भने नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा लिएको केही तस्वीरको कारण चर्चामा रहेकी छन् । शैफ अलि खानसँग विवाह गरेकी अभिनेत्री करिनाले नयाँ वर्ष पतिको साथमा मनाएकी थिइन् ।
नयाँ वर्ष मनाउन स्विजरल्याण्ड पुगेकी करीनको भन्दा धेरै उनले लगाएको कपडाको चर्चा धेरै भएको छ । निलो रंगको गाउनमा सजिएकी करिना हट र सुन्दर देखिएकी थिइन् । छोरा तैमुर र श्रीमानसँगै नयाँ वर्ष मनाएकी करीनाले लगाएको गाउनको मूल्य बलिउडकै महँगो भएको भन्दै चर्चामा हुन् थालेको छ ।नयाँ वर्ष मनाउँन घुम्न जाँने क्रममा लगाएकी करिनाको गाउनको मुल्य भारतीय रुपैया ९ लाख २६ हजार अर्थात नेपाली रुपैयाँ १५ लाख पर्न जाने भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ ।
छोरा हुर्काउन बलिउडदेखि केही समय टाढा रहेकी अभनेत्री करिना अब छिट्टै फिल्म ‘गुड न्युज’ बाट बलिउडमा फर्कने तयारीमा रहेकी छन् । उक्त फिल्ममा करीना अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ र कियारा आडवाणीसंग देखा पर्दैछिन्। करिनाले करण जौहरको फिल्म ‘तख्त’ मा पनि काम गर्ने भएकी छन् । उनको साथमा रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, जाह्नवी कपूरको मूख्य भूमिका रहनेछ ।
सुमार्गीको रकमबारे सर्वोच्चको आदेश : विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू
सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहर फाल्नेलाई जरिवाना